Ngwaa French: ndepụta, mmega ahụ na njikọta - UniProyecta
Ọ bụrụ na enwere ihe siri ike ịmụta n'asụsụ ma ụmụ akwụkwọ kpọrọ ya asị, ọ bụ jikọta ngwaa na French. Na ihu ọma, n'asụsụ ala nke France, ụkpụrụ nke njikọta bụ otu na ndị anyị na -eji n'asụsụ Spanish, site na nke a anyị na -ekwu na a na -agbanwe ngwaa dabere na isiokwu na -eme ha na ihe na -eme (n'oge gara aga, ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu) na nke ha na -eme.
Asụsụ French nwere oge ngwaa iri na isii n'ozuzu ya na nke ndị a, 16 bụ nke a na -ejikarị eme ihe na nke nwere ọtụtụ ọnọdụ. Taa, anyị ga -enye gị ụzọ / ụzọ anọ ka ị nwee ike jikọta ngwaa French ngwa ngwa.
1 Ụdị Nke 1: Mkpakọ nke njikọta
1.1 Ịkpụzi ngwaa
1.2 Cheta nnọchiaha ndị nnọchiaha
1.3 Buru n'uche njedebe dị iche iche a na -eji na ngwaa
1.4 Chọpụta ihe a na-akpọ ngwa ngwa (enwere atọ na mkpokọta)
1.5 Na -amụ ngwa ngwa
2 Ụdị Nº 2: Jikọta ngwaa French n'oge gara aga simple = passé composé
2.1 Jiri mfe gara aga maka ngwaa nke kwụsịrị n'oge gara aga
2.2 Jikọta ngwaa “avoir” ugbu a
2.3 Chọta akụkụ nke omume ndị gara aga
2.4 Oge gara aga = Jikọọ akụkụ abụọ ahụ
2.5 Ngwaa na -eji être kama ịbụ avoir
2.6 Jiri "être" kama "avoir"
3 Ụdị nke 3: Njikọta nke ugbu a
3.1 Ugbu a = Omume / ọbịbịa
3.2 Jikọta ndị na -ejedebe na "er"
3.3 Jikọta ngwaa French ndị na -ejedebe na "gaa"
3.4 Jikọta ngwaa na -agwụ na re
3.5 Ọmụmụ na -ejikọ ngwaa na -adịghị agbanwe agbanwe
4 Ụdị Nº 4: Njikọta ngwaa n'adịghị mma gara aga
4.1 A na -eme egwuregwu ndị ahụ n'otu oge
4.2 Chọta mgbọrọgwụ nke omume ahụ site na ibelata "ons"
4.3 Mee ka njedebe nke oge gara aga na -ezughị okè dị na mgbọrọgwụ
Ụdị Nke 1: Mkpakọ nke njikọta
Cheta na njikọta ahụ na 'ịkpụzi' ngwaa dabere na isiokwu ị na -ekwu maka ya, nke a na -emekwa n'asụsụ Spanish, dịka ọmụmaatụ: anyị nwere ike ịsị 'ha wulie elu' mana o doro anya na anyị ga -agbanwe ngwaa ahụ ka ọ bụrụ 'ịwụli elu' ọ bụrụ na onye ahụ ma ọ bụ karịa, isiokwu na -eme ya bụ “gị”. Ọ bụrụ na anyị gaa French, njikọta ya yiri: isiokwu ọ bụla (anyị, ha, gị) nwere njikọ dị iche.
Cheta nnọchiaha ndị nnọchiaha
Ọ dị ezigbo mkpa ijikọta ngwaa French nke ahụ cheta nke bụ nnọchiaha nke ejiri n'asụsụ a, nke nwere nnochiaha ọzọ na Spanish.
I = ehh.
Ọ, ọ, ọ = il, elle, na.
Ị = ị.
Anyị = Anyị nọ.
Ha, Ha = ha, ha.
Gị ma ọ bụ gị = ị nwere.
Buru n'uche njedebe dị iche iche a na -eji na ngwaa
Ọ bụrụ na ngwaa na -efu njikọ ya na ya, a na -akpọ ya "enweghị njedebe". N'asụsụ Spanish, omume okwu dị iche iche na ngwụcha na -ejedebe na ar, ir, na er (dịka ịga ije, ịgba ọsọ, wdg). N'asụsụ French, enweghi ngwụcha nwere ngwaa dị ka aller (ịga) ma ọ bụ ịzaghachi (ịzaghachi). Enweghi ngwụcha na -eme ka ngwaa bụrụ ntọala wee bụrụ ihe a na -emegharị mgbe anyị nyere ya njiko chọrọ.
Chọpụta ihe a na-akpọ ngwa ngwa (enwere atọ na mkpokọta)
Ọtụtụ ngwaa dị na French nwere ike kewaa n'ime ụdị 3 dabere na njedebe nke enweghị njedebe nke kwekọrọ na ha. Ụdị nke ọ bụla gụnyere ọtụtụ iwu njikọta na ọ dị mkpa ka ị mara ha iji jikọta ngwaa French.
-Verbs na -ejedebe na '' gaa '': maka ngwaa dị ka '' otuto '' (ịkụ aka) na '' finir '' (mechaa).
-Verbs na -ejedebe na 're': gụnyere ngwaa dịka 'ghọta' (gee ntị).
-Verbs na -ejedebe na "er": maka ngwaa dị ka "nri anụ ụlọ" (iri nri) ma ọ bụ "iri nri" (ikwu okwu).
Na -amụ ngwa ngwa
Dị ka n'asụsụ ọ bụla, na French abụghị ihe dị iche, enwere ngwaa kwụsịrị iji otu iwu njikọta dị ka ndị ọzọ, na wezuga ndị a, ọtụtụ ngwaa ngwaa dị iche, yabụ maka ngwaa na -adịghị agbanwe agbanwe, a na -achọkarị ya n'oge.
Anyị ga -egosi gị ndepụta ebe ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ngwaa na -anaghị arụkarị.
Ser = :tre:
Achọrọ = Vouloir
Ime = Ịma
Gaa = Aller
Nwere = Avoir
Tinye, ebe = Mettre
Ụdị Nº 2: Jikọta ngwaa French n'oge gara aga simple = passé composé
Jiri mfe gara aga maka ngwaa nke kwụsịrị n'oge gara aga
A na -eji ihe e dere ede ma ọ bụ ihe gara aga dị mfe maka ngwaa nke ebidola na njedebe ya nke ọma, dịka ọmụmaatụ "atụbara m pensụl" ma ọ bụ "ha agbaala ọtụtụ ọsọ". Maka ngwaa nke na -eme oge niile n'oge gara aga, dị ka ihu igwe, a na -eji ngwa ngwa ngwa ngwa ọzọ eme ihe. Ederede gara aga dị mfe ma ọ bụ passé bụ ihe a na -ahụkarị n'oge gara aga n'asụsụ French.
Jikọta ngwaa “avoir” ugbu a
Iji bido ijikọ ngwaa na French site n'oge gara aga, ekwesịrị iburu n'uche na nke ikpeazụ na -etolite ngwa ngwa, ya bụ, ọ nwere akụkụ abụọ. Akụkụ nke mbụ sitere na njikọta ngwaa iji nwee (avoir), nke ga -arụzu otu ọrụ dị ka ngwaa “inwe” n'asụsụ Spanish, dịka ọmụmaatụ "agbanyerela m" ma ọ bụ "O kekọtala ya". Ka anyị chetara gị njikọta nke ngwaa “avoir”:
Nwere = Avoir = ma ọ bụ ihe ọzọ, dịka, jaai, vous avez, il a, anyị avons.
Chọta akụkụ nke omume ndị gara aga
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ahịrịokwu ahụ "agbaala m ọsọ", ị ga -ahụ na "ịgba ọsọ" adịghị ka njikọta nke ihe a na -eme "na -agba ọsọ", nke a na -emekwa n'asụsụ French, akụkụ nke ihe ndị mere n'oge gara aga nwere ụzọ nke na -agwụcha iche, na ihe kacha mma bụ na ọ naghị esiri ha ike icheta:
Ngwaa na -agwụ na "er": "e" Dịka ọmụmaatụ: montré
Ngwaa ndị na -agwụ na "go": "i" Ọmụmaatụ: réussi
Ngwaa na -agwụ na "re": "u" Dịka ọmụmaatụ. Aghọtara m
Oge gara aga = Jikọọ akụkụ abụọ ahụ
Ihe ị ga -eme ugbu a bụ isonye na ngwaa ngwaa a “avoir” ya na onye nke gara aga, yabụ na anyị ga -enwe ngwaa ngwa ngwa n'oge gara aga. Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ịha nhata, nha nhata nke njikọta n'asụsụ Spanish nke anyị hụrụ n'oge gara aga ga -abụ "agbaala m ọsọ" ma ọ bụ "Ha gbagburu", n'agbanyeghị na enwere ike ịtụgharị ya dịka "m gbara ọsọ" ma ọ bụ "Ha gbara ". Ọmụmaatụ:
Mbụ onye: "ai + ngwaa" m kwuru = Ọ dị mma
Onye nke abụọ "dị ka ngwaa" Ị gwụchara = Ị dị ndụ
Onye nke atọ "a + ngwaa" Ọ nụrụ = Ọ bụ compreu.
Ọtụtụ onye mbụ "avons + verb" Anyị nwere ihe ịga nke ọma = Anyị enweela ọhụụ
Otutu onye nke abuo "avez + verb" Ị nwara = Vous avez edemede
Onye nke atọ otutu "ont + verb" Ha zara = Elles ont rpondu.
Okwu ndị a na -eji ibu kama avoir
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ omume niile na French na -eji usoro (avoir + participle gara aga), n'agbanyeghị na iji mee ka njikọta nke ụfọdụ omume n'oge gara aga dị mfe, anyị ga -eji: dị ka omume n'oge gara aga (dịka ọmụmaatụ: adara m). Okwu ndị a kpọtụrụ aha bụ:
zuru ike, bụrụ, gbadata, bịa, laghachite, monter, pụọ, bịarute, onye na -eli ozu, ụdị, aller, naître, onye mbata, onye mgbazinye, onye nloghachi, mourir.
A na -amata ngwaa ndị a dị ka ngwaa na -anaghị agbanwe agbanwe.
Jiri "être" kama "avoir"
Anyị ga -eme nke a iji jikọta ngwaa na French nke anyị kpọtụrụ aha na nzọụkwụ gara aga. Ozugbo anyị mụrụ akwụkwọ ngwaa a ga -ejikọ ya na «ibu»(“ Ka ọ bụrụ ”) anyị ga -esonyere ha na mmemme nke gara aga iji nye ha njikọta ha n'oge gara aga, nkọwa zuru oke iburu n'uche bụ na onye ga -eso ya ga -anọrịrị na onye na -eme ihe ahụ. Maka isiokwu dị iche iche, a na -agbakwunye "s" na onye otu yana maka ụmụ nwanyị, agbakwunyere leta "e":
Onye mbu (suis + ngwaa) Yo caí = (N'ọnọdụ a kpọtụrụ aha, onye ahụ bụ nwanyị) Ọ dị mma
Onye nke abụọ (es + ngwaa) Ị dara = Ị bụ nwata
Onye nke atọ (est + verb) Ọ dara = Ọ bụ eziokwu
Onye mbụ ọtụtụ (sommes + ngwaa) Anyị dara = Anyị nọ na mgbede
Ọtụtụ mmadụ (êtes + ngwaa) Ị dara = Ọ dị mma na tombés
Onye nke atọ otutu (sont + verb) Ha dara = Elles hụrụ ya n'anya
Ụdị nke 3: Njikọta nke ugbu a
Ugbu a = Omume / ọbịbịa
Ị ga -ejirịrị ihe dị ugbu a mgbe ejiri ngwaa a na -eji eme ihe ma ọ bụ n'ụzọ dị ugbu a. Ọ dabara nke ọma na French ugbu a ka a na -eji ya na Spanish, a na -eji ngwaa a na -asụgharị ahịrịokwu dịka "Ọ dara osisi." Na ngwaa dị iche iche, enwere ụdị edemede atọ na ụfọdụ ngwaa na -adịghị ahụkebe (omume ndị na -anaghị eji iwu izugbe). Akụkụ nke ngwaa bụ:
Ngwaa na -agwụ na "gaa"
Ngwaa na -agwụ na "re"
Okwu ngwaa na ejedebe na "er"
Jikọta ndị na -ejedebe na "er"
Anyị ga -ejikọ ngwaa n'asụsụ French nke mechiri na "er", dochie njedebe ahụ na nke ọzọ; nke ọ bụla n'ime nnọchiaha dị iche iche (ya, anyị, m, wdg) nwere njedebe dị iche nke a ga -eji dochie “er” ahụ. Njedebe bụ: e, e, es, ons, ez, ent. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga -eji ngwaa “parler” (ikwu okwu):
Mbụ onye "e" m na -asụ = Je parle
Onye nke abụọ "bụ" Ị na -asụ = Ị na -asụ
Onye nke atọ "e" Ọ na -ekwu okwu = Il parle
Mbụ onye ọtụtụ "ons" Anyị na -ekwu = Nous parlons
Onye otu abụọ "ez" Ị na -asụ = Vous parlez
Onye nke atọ otutu "ent" Ha na -asụ = Elles parlent
Jikọta ngwaa French ndị na -ejedebe na "gaa"
Dochie ngwaa ndị a na njedebe ọzọ, a na -eme nke a site n'ịgbanwe ya dịka nnọchiaha:
Issons, ezitere, ọ bụ ya. Ka anyị jiri njikọta ịkụ aka (“ịkụ aka”) dị ka ihe atụ maka emume a:
Onye mbụ "bụ" m toro -> J'applaudis.
Onye nke abụọ "bụ" Ị toro -> Tu tie mkpu
Onye nke atọ "ya" Ọ kụrụ aka -> Ana m eto
Otutu onye nke otutu "issons" anyi toro ->Anyị kụrụ aka
Otutu onye nke abuo "issez" Ị kụrụ -> Ị ga -eti mkpu
Otutu onye nke atọ "ezitere" Ha na -akụ aka -> Ils na -eto otuto,
Jikọta ngwaa na -agwụ na re
N'ọnọdụ a, anyị ga -edochi njedebe ahụ na onye ọzọ, anyị ga -ekwusi ike na ndị a bụ ngwa ngwa anaghị adịkarị, mana ọ dị mkpa ka ị mara ka esi ejikọ ha otu. Njedebe ga -agbanwe ga -abụ: ọ nweghị, ons, ez, ent, s na s. Njikọta nke onye nke atọ, ya bụ, ya ma ọ bụ ya, enweghị njikọ. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga -ewere ngwaa ịza (répondre):
Mbụ onye "m" na -aza -> Je zaa
Onye nke abụọ "s" Ị zaa -> Azịza gị
Onye nke atọ "ọ dịghị ihe" Ọ na -aza -> Echere m
Mbụ onye ọtụtụ "ons" Anyị na -aza -> Anyị na -amụgharị
Otu onye nke abụọ "ez" Ị zaa -> Ị zaghachi
Onye nke atọ otutu "ent" Ha na -aza -> Elles kwuru
Ọmụmụ na -ejikọ ngwaa na -adịghị agbanwe agbanwe
Ị nwere ike ịmara na ngwaa ndị na -adịghị agbanwe agbanwe dị ọtụtụ, mana ọ na -ewute anyị ịgwa gị na ọ dị mkpa ịmara otu esi ejikọ ha, n'okpuru anyị ga -enye gị naanị ihe atụ ole na ole, nke ọzọ ị nwere ike ịchọ site na itinye “ngwaa + conjugation n'asụsụ French ”na Google.
Nwee = avoir = Anyị adịteghị aka, jaai, vous avez, il a, elles ont, ka
Ir = Aller = ị na -ahụ, ọ na -adị, na -adịkwa mma, ma ọ bụ na -enwe ihuenyo, ka ọ dị
Ụdị Nº 4: Njikọta ngwaa n'adịghị mma gara aga
A na -eme egwuregwu ndị ahụ n'otu oge
Ọ dị mkpa ịmata nke ahụ a na -eji ezughị oke gara aga mee ihe maka ngwaa nke na -eme n'ime oge. N'asụsụ Spanish isiokwu a yiri, a na -eji oge akpọrọ maka ngwaa nke mere n'oge gara aga mana ọ bụghị n'otu oge (Ex: "Ana m egwu basketball mgbe m dị afọ 15" ma ọ bụ "Ha na -arịọ maka pizza kwa ụbọchị") n'ihe atụ ndị a, ị nwere ike na -atụ aka oge ụfọdụ mgbe ha nyere iwu Pizza ma ọ bụ kpọọ basketball)
Ekwesịrị iji okwu ngwaa a dịka ọmụmaatụ maka omume ma ọ bụ ngwa ngwa, afọ, oge ihu igwe, ọnọdụ nke ịbụ, data nzacha ma ọ bụ mmetụta dị iche iche.
A na -eji oge gara aga dị mfe maka ọnọdụ ndị na -eme na akụkọ ("m zoro n'okporo ụzọ") na -ejikwa ihe na -ezughị okè gara aga maka data juputara ("Adị m afọ 15", "Ọ bụ igwe ojii")
Chọta mgbọrọgwụ nke omume ahụ site na ibelata "ons"
Nke a na -emetụta ngwaa French nke ejikọtara na onye mbụ ọtụtụ na nke ugbu aIji chọta mgbọrọgwụ, ị ga -ehichapụ njedebe "ons", ọ na -arụkwa ọrụ maka ngwa ngwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite ijikọ ngwaa French na ezughị oke gara aga, hichapụ “ons” site na njikọta nke onye ahụ na oge ekwuru na mbido. Enwere ike itinye ma ọ bụ chịkwaa nke a n'asụsụ Spanish, dịka ọmụmaatụ ngwaa ngwaa bụ andar bụ "na" (ando, andas, andamos, anduviste). Ọmụmaatụ:
Nchacha = finissons = finniss
Enwere otu ewezuga iwu na anyị kwuru na ọ bụ ngwaa "Ụtọ", njikọta ya na ọtụtụ mmadụ nke mbụ anaghị akwụsị na "ons" («anyị mere«). Mgbọrọgwụ nke omume a bụ "ét".
Mee ka njedebe nke oge gara aga na -ezughị okè dị na mgbọrọgwụ
Anyị ga -eme nke a iji nweta njikọta n'asụsụ French, n'adịghị ka ihe edere edere ma ọ bụ dị mfe gara aga, ezughị oke gara aga bụ otu okwu. Yabụ na ihe anyị ga -eme bụ ijikọ njedebe na mgbọrọgwụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga -ejikọ ngwaa ahụ ịgba mmiri (ile anya):
Onye mbu (ais) m lere anya = Heh ihe egwu
Onye nke abụọ (ais) Ị lere = Ị ga -agba ya mmiri
Onye nke atọ (ait) Ọ lere anya = Ọ dị egwu.
Ọtụtụ mmadụ (ion) Anyị lere anya = Echiche anyị
Otutu onye nke abuo (iez) I lere anya = Ị bụ regardiez
Ọtụtụ mmadụ nke atọ (aient) Ha lere anya = Elles dị ịtụnanya
Ka ọ dị ugbu a nkuzi anyị gbasara otu esi ejikọ ngwaa na French abịala, anyị nwere olile anya na ọ baara gị uru, n'agbanyeghị na onweghị onye kwuru na ọ bụ asụsụ dị mfe, ọ bụ okwu ịmụ ya na itinye ya n'ọrụ. Ya gaziere ya!
Mara: Ọ bụrụ n'ịgụ ihe niile na -agwụ gị ike, anyị na -ahapụrụ gị ụfọdụ vidiyo ka ị nwee ike mụta ịjikọ ngwaa n'asụsụ French ka ọ dị mfe, ọkachasị ịmụta Ịkpọ okwu French:
Jikọta ngwaa mgbe niile na ER
Inicio » Asụsụ » Frances » Ngwaa French: ndepụta, mmega ahụ na njikọta